युवराज नयाँघरे शनिवार, असार ३१, २०७४ 3882 पटक पढिएको
बोल्नेका सुक्खा तर सुन्नेका आँखा भए पूरै रसिला !
म सुनिरहेको छु उसका कथा । छाती चहराउने कुरा । थामी-थामी मनको भल— उसका कुरा सुनिरहेको छु एकोहोरो । घरी-घरी बगे आँसुको भुल्का ।
परेली भिज्न रोकिएन । पुछिरहेँ हरेक औंलाले । कुरा सुन्दासुन्दै भक्कानो छुट्ला जस्तो हुन्थ्यो । अनि भुल्भुलाएर आँखाका कोसबाट बगिहाल्थ्यो तातो आँसु ।
फेरि नाक पनि रसाइहाल्ने !
तर, बोल्ने त्यो केटीका आँखा सुक्खा छन्— छैन एक थोपो आँसु । कुनै र कतै कोसबाट भिजेका छैनन् । उसका नाक पनि बजेका छैनन् ।
म त सही थापिरहँदा पनि नाक बजाएरै ‘हजुर ! हजुर !!' भनिरहेको छु । मेरो मन कति धेरै भत्केछ— सुनेका कुराले । मेरो मन कति धेरै पग्लेछ— उसको क्रन्दनले । मेरो छाती कति कहालिएछ— सुनिरहेका सुस्केराले ।
‘सर, बुबाले मेरी आमालाई बिहे गरेपछि घरमा ठूली आमा हुनुहुन्थ्यो । साहै्रै दुःख थियो । ठूली आमाबाट चारजना सन्तान थिए— दाइ र दिदीहरू । मेरी आमाबाट मैमात्र जन्मिएकी हुँ !
म जन्मेको चार वर्षपछि त आमा पनि बितिहाल्नुभयो । अब घर फेरि रित्तो भयो । बालाई उस्तै दुःख, उस्तै सास्ती । चार सन्तानको देखभाल होला कि भनेर मेरी आमा भित्र्याउनु भएथ्यो । लगत्तै म जन्मेर अरू दुःख थपिदिएँ । बोझमाथि बोझ !'
फेरि चिसा परेलीमा भुल्भुलायो आँसु । तप्प-तप्प नखसेर बगेका आँसुलाई माझी औंलाले पुछेर हलुका पारेँ आँखालाई । आँसुले सुनिरहेका कानलाई नजिकै राखेको रहेछ— ऊ घरी-घरी मौन बन्थ्यो ।
भित्र छातीमा कस्तो-कस्तो चोटले हिर्काउँथ्यो भ्वाक्क-भ्वाक्क । वेदनाको व्याकरण आफ्नै खालको हुँदो रहेछ । आफ्नै खालको भाषा पनि । के अनौठो बिजुली र हुरीबतास !
पर-पर टोलाउन पुगेका आँखामा एउटा बेजोडको घामपानी आइरहन्थ्यो । दुःखले मिलिक्क-मिलिक्क चम्काउन छोडेन बिजुली ।
‘सर, घरमा खान नि थिएन कि ! मलाई एकदमै भोक लाग्थ्यो । बुबा जंगलमा काठ बोक्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । काठ चिर्ने आरावालहरू हुन्थे । अरू दिदीहरू स्कुल जान्थे । मलाई गाईगोरु धपाएर त्यसकै गोठालो जा भन्थे । म दिनभरि गाईगोरु चराएरै दिन बिताउँथेँ ।
म आसले कराई र भाँडाकुँडा हेर्थें । त्यही पानी भरिएको भाँडा पनि कुकुरले चाटिरहेको देख्थेँ । भोकले पेट बाँउडिन्थ्यो । अनि म घर पछाडिको बारीतिर पस्थेँ ।
भोक कति लाग्थ्यो कति ! सर्टको बाहुला चुसिरहन्थेँ । दुवै बाहुला चुस्ता-चुस्ता एकदमै सुकिला हुन्थे । तर कुइनेटो मास्तिर कालैमैलै हुन्थे ।'
भत्किएको मनमा फेरि चोट चर्चराउँछ । सुन्नलाई गाह्रो भएको छ । तर, नसुनी भएको छैन मैले । आँखामा ओर्लिएको दुःख बग्छ । छातीमा नदेखिने वेदनाले गिजोलेको गिजोलेकै गर्छ । आँसु पनि थामिने र भुल्भुलाउने गरिरहेकै छ ।
कसरी लुकाउनु र आँसुलाई ? कसरी छेक्नु र दुःखको यो झरीलाई ? कसरी छेकथुन गर्नु चोटको बाँधलाई ?
‘सर ! भान्सामा गएर हेर्थें । कराई र काला भाँडामात्र देख्थेँ । त्यो पनि एकै ठाउँमा भेला पारी दिदीहरूले राखिसकेका हुन्थे । जुठेल्नोका भाँडामा टन्न पारी पानी हालिदिन्थे ।
म आसले कराई र भाँडाकुँडा हेर्थें । त्यही पानी भरिएको भाँडा पनि कुकुरले चाटिरहेको देख्थेँ । भोकले पेट बाँउडिन्थ्यो । अनि म घर पछाडिको बारीतिर पस्थेँ ।'
आँखाका परेली फेरि भिज्थे सरर्र । म तिनलाई कान्छी औंलाले धर्कोजस्तो तानेर पुछपाछ गर्थें । मनमा हजारौं किलोको गरुँगो भारीले बेस्सरी थिचथाच पार्थे मलाई ।
आँखा चिम्लेर वेदना मोड्न सक्तिन्थेँ । हृदयका पत्रमा आएर घरी-घरी तिनले धावा बोल्न छोडेनन् । आखिर बाटो त्यही रहेछ । दुःखले सुस्केरा हाल्ने एउटै दैलो रहेछ आँखा । त्यहीँ आएर साउनको झरीजस्तो बर्सिन्थ्यो बेस्सरी ।
‘घर पछाडि गोठसँगै जोडिएको बारी थियो । त्यहाँ बुवाले काउली रोप्नुहुन्थ्यो । गोबरको मल भएर होला— काउलीहरू एकदमै सप्लाएका र अग्ला-अग्ला हुन्थे । म तिनै काउलीका मसिना पात खाँदै-खाँदै भोक मार्थें ।
चरी अमिलो खान्थेँ । कलिलो दुबो खान्थेँ । अनि भोकले आलसतालसिएर कतिखेर-कतिखेर निदाउँथेँ ।'
मैले बोलिरहेकी त्यसको अनुहार एक पटक आँसु भुलभुलाएर हेर्नै सकिनँ । भुइँतिर निहुरिएँ । मेरा नांगो बूढीऔंलाको नङ पखालियो तप्प-तप्प तातो आँसुले ।
बाँधै फुटेजस्तो भयो आँखामा । आँसुले समयको कुनै ख्यालै गरेन । आयो र आएको-आएकै गरिरह्यो आँसुको झरीबादल ।
‘सर, भोकले पेट दुखी-दुखी भए पनि निदाउँथेँ म । साँझमा बुवा आउनु हुन्थ्यो जंगलबाट काठ बोकी थाकेर । घरमा अरूलाई मेरो के चासो र ! दुईचार पटक बुवाले त्यही काउली बारीमा नै भेट्नु भएकोले होला— धेरैजसो त्यतै गएर खोज्नुहुन्थ्यो मलाई ।
मलाई त्यही काउलीको अग्ला-अग्ला बोटमुनि सुत्ने बानी परेको थियो । निष्ठुरी दाइदिदीको मुख हेर्न नि मन लाग्दैन्थ्यो । ती एकदमै रिस उठ्दा थिए । अनि म पनि अग्ला न अग्ला बोटमुनि बस्थेँ, सुत्थेँ र समय कटाउँथेँ ।'
मैले नबोलेर के भो त ? आँखामा धेरै चोटले धारावाहिक बोलेको लाग्दैछ । मैले छातीलाई चुप लगाए पनि— ओठमा त्यसको छुवाइ पटकपटक आएको-आएकै छ ।
आँसुसँग सबै भाषाले बुझ्ने अर्थ हुँदो रहेछ । म यतिबेला त्यही अनुभव गरिरहेकै छु । एकदमै युद्धरत अवस्था— वेदना र सहानुभूतिको कुस्ताकुस्ती ।
‘कति भुसुना भुनभुनाउँदा हुन् । कति पुतली हुँदा हुन् । कति लाभ्रे कीरा लिब्रिकलिब्रिक गरिरहँदा हुन् । कति झुसिलकीरा जीउ मर्काएर कुदिरहेकै हुँदा हुन् । कति गोब्रे कीरा र खपटे कीरा लमकलमक गरिरहँदा हुन् त्यो बेला ।
लामखुट्टे पनि हुन्थे होला । माकुरा कति सल्बलाउँथे होलान् । झिँगा कति उडिरहेका हुन्थे होला । कमिलाको रगरगी कति हुन्थ्यो होला मेरा जीउमा ।
एक दिन हैन, दुई दिन हैन, महिनौं दिन मैले यसरी नै बिताएँ । मेरो जीउमा घिउ कमिला नि हिँड्यो होला । रोटे कमिलाले पनि नाघ्यो होला मेरो शरीर । रातो कमिलाले पनि मेरो शरीर छिचोल्यो होला । कालो कमिलाले मलाई घोर्रिई-घोर्रिई हे¥यो होला ।'
त्यो दुःखमा फेरि मेरा आँखा रसाए । उसका ओठमा दुःखले छिटो ओर्लन खोजेको दौडिरहेछन् मेरा आँसुले डबडबाएका परेलीले ।
मेरा सबै औंलाले आँसु पुछिसकेँ । मैले टेकेको भुइँमा आँसु खसेर धेरै खालका आकार बनाइसके । त्यही आकारमा म तिनको दुःख मिसाउन खोजिरहेको छु ।
‘सर, कनसुत्लो पनि कुद्यो होला मेरो शरीरमा । आँखा फोडुवाले पनि मेरो निदाएको शरीर कति पटक वारपार ग¥यो होला ! फट्याङ्ग्रोले मलाई कति पटक हेर्दै उड्यो होला ।
तर भोकले निदाएको शरीरमा म कुन लोकमा पुगेकी हुन्थेँ । भोकले मलाई अँटठ्याएको हुँदो रहेछ । तिर्खाले लडाएको हुँदो रहेछ । भोक पनि त थपिँदो हो— त्यही हरेक दिन थपिने भोकले रोग बनाउँदो रहेछ । शायद त्यही रोगले मलाई हरेक दिन काउली बारीमा सुत्न सघाएको होला !
बारुलाका कति बगालले मलाई बिउँझाउन नि खोजे होलान् । मौरीका हूलले मलाई कति फन्को मारी उडे होलान् । भोकले लडेको मेरो शरीरमा अरिंगालको घोचपेच पनि भयो होला ।'
मैले थामिई-थामिई उसका कुरा सुनेँ । मुटुमा धेरैचोटि चट्याङ परिसक्यो । छातीमा उठेको कुइरीमण्डलले परेलीमा आँसुको सिमसिमे वर्षा भएको भएकै छ । एउटा ठूलो पहरोले छातीमा गड्याम्म थिचेको थिचेकै छ ।
परेलीमा आएको आँसुले घरी ठूलो छाल उराल्छ । घरी सानो खोल्सी बनाएरै भए पनि मनमा पहिरो पारेको पारेकै छ ।
अब त रातै भइसके होलान् मेरा आँखाहरू ।
त्यसको कुरा सुन्दासुन्दा मेरा आँखा धेरै खेप आँसुको भेलबाढीमा परेका-परेकै छन् । म आँसुको मुस्लोलाई दस औंलाले पुछेर नभ्याउने भएँ ।
‘सर, पढ्न पाइनँ । त्यतिखेर काउली बारीमा मेरा आँखामा पुतली परेनछ र मैले आजसम्म देखिरहेको छु । त्यतिखेर कनसुत्लो मेरो कानमा पसेर मलाई बहिरो बनाएछन् । फट्याङ्ग्रो मेरो नाकमा पसेनछ र मैले आजसम्म सुँघ्न सकेँ । झुसिलकीराले मलाई डसेनछ र म बाँचेँ आजसम्म ।
तर पढ्न नपाएको चोट त आजभोलि लाग्दैछ । हिजोआज हरेक दिन साँच्चैका झुसिलकीरा, कनसुत्ले, लामखुट्टे, कमिला, आँखा फोडुवा, बारुलाले टोकिरहेका छन् मलाई ।'
आँसु डबडबाएर सामुन्ने बोलिरहेकीलाई ठम्याउन सकिरहेको छैन म !
शनिवार, माघ ६, २०७४ 'अनुवादक लेखकको विश्वसनीय मुखपात्र हो'
शनिवार, माघ ६, २०७४ कथामा नारी जीवन
शनिवार, माघ ६, २०७४ कुकुर पाल्नु मानसिक रोग
शनिवार, माघ ६, २०७४ रोनाल्डिन्होको आरोह–अवरोह
शनिवार, माघ ६, २०७४ चाइनिज भिनाजु
शनिवार, माघ ६, २०७४ रामायण-महाभारत : कहाँ छन् राम, कहाँ छन् कृष्ण ?
शनिवार, माघ ६, २०७४ किन असफल भयो सिंहदरबार विद्रोह ?
शनिवार, माघ ६, २०७४ फिरफिर हल्लिरहेको वैजनी स्कार्फ
धनकुटामा 'निषेधाज्ञा' र 'आमहड्ताल' जारी 935
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेश सरकारको नेतृत्व 369
डेढ लाख सेवाग्राहीले अझै पाएनन् ‘स्मार्ट कार्ड’ 118
कालिकोटमा निमोनियाले एकै टोलका तीन शिशुको मृत्यु 141
विराटनगरमा व्यवसायीमाथि साङ्घातिक आक्रमण 1047
जिससको भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय 345
टेलिकमको आम्दानी पाँच गुणा बढ्यो 1061